Dowladda Kenya oo dalbatay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo burburkii diyaaradii Bardaale | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Dowladda Kenya oo dalbatay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo burburkii diyaaradii...
Dowladda Kenya oo dalbatay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo burburkii diyaaradii Bardaale
Kenya ayaa codsaday in baaritaanka burburka diyaaraa ay qeyb ka noqoto Beesha caalamka, si loo soo bandhigo xaqiiqada.
Diyaarada laga lahaa dalka Kenya taas oo ku burburtay shalay magaalada Bardaale ee gudaha Soomaaliy ayey Dowladda Kenya ayaa dalbatay baaritaan dhab ah oo ku saabsan diyaaraddii shalay ku burburtay degmada Bardaale, taasoo warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan in la soo riday.
Qoraal ka soo baxay dowladda Kenya ayaa waxay ku codsaday in baaritaankaas ay qeyb ka noqoto Beesha caalamka, si loo soo bandhigo xaqiiqada jirta
Diyaaradda African Express oo laga leeyahay dalka Kenya ayaa muddo ka howlgaleysay Soomaaliya, iyadoo heysatay ruqsad, waxaana Maamulka Hey’adda Saadaasha Hawada ee dalka Kenya uu sheegay in diyaaradaas xiriirkeeda la waayay shalay 4-tii galabnimo iyo qadar 20-daqiiqo ah.
Mas’uuliyiinta hey’addaas ayaa sheegay inay jawaab ka sugayaan dowladda Soomaaliya, cilada sababtay diyaaraddaas.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed ayaa laga soo xigtay in Ciidamada Itoobiya oo ku guda jiray tababar dabrid ah ay soo rideen diyaaradaas oo ay ku dhacday hubkii ay ridayeen.
Lix qof oo laba Soomaali aheyd ayaa ku naf waayey shilkaas diyaaradeed, kuwaasoo kala ahaa, Captan Xasan Musse Bulxan, Captan Mubruuk, Captan Cumar, Eng. Kenyaan ah, mas’uulkii xamuulka saarnaa diyaaradda Cali Madax-Gaduud iyo wakiilkii Shirkadda Saciid Cabdullaahi Maxamed.